Home अर्थ दैनिक १६ हजार यात्रुलाई सेवा दिने गौतमबुद्ध विमानस्थल यस्तो बन्दैछ
बुटवल । रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै चिटिक्क देखिन थालेको छ । भौतिक संरचना निर्माण कार्य करिब सकिएसँगै विमानस्थलले आकार लिएको तस्विरबाट देख्न सकिन्छ । समथर भू–भागमा बनेको तयार विमानस्थल हेर्दा साँच्चै लोभलाग्दो देखिन्छ ।
विमानस्थल आयोजनाले भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणका पुगेको बताए । ‘हामी निर्माणको अन्तिमको चरणको पुगेका छौं’ अधिकारीले भने, ‘अब हामी फिनिसिङ र उपकरण जडानको काममा मात्र बाँकी छ । धावनमार्ग वरिपरिको सडक (पेरिमेटर) मात्र भौतिक पूर्वाधारको काम बाँकी हो ।’
९१ प्रतिशत काम सकियो
अहिलेसम्म विमानस्थलको काम ९१ प्रतिशत सम्पन्न आयोजनाको भनाइ छ । ‘लकडाउन’ मा पनि निर्माणको काम नरोकिएको विकानस्थलमा अहिले पनि ३० चिनियाँसहित ३ सय कामदारले धमाधम काम गरिरहेका छन् । धावनमार्गका लागि लाइट र कनभेयर बेल्ट (यात्रुका व्याग घुमेर आउने ठाउँ) का उपकरण जडान गर्ने काम बाँकी छ । ती उपकरण चीनबाट नेपालतर्फ हिँडे पनि ल्हासामा रोकिएका छन् । नेपालका लागि हिँडेका उपकरणका गाडी जुलाई १० मा (असार १० गते) देखि बाटोमै रोकिएका हुन् । उपकरण नेपाल भित्र्याउनका लागि विभागीय रुपमा समन्वय भइरहेको छ ।
ती उपकरण जडानका लागि चीन, थाइल्याण्ड, अमेरिका र अष्ट्रलियाबाट इन्जिनियरहरू आउनुपर्ने हुन्छ । तर, कोरोना महामारीले विश्व नैं आक्रान्त बनाएको अवस्था ती मुलुकहरूमा कहिले कामदार आउँछन्, कहिले जडान हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित जस्तै छ । सरकारले आउँदो भदौं १ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू गर्ने बताएको छ । चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसनले सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ मा ६ अर्ब २२ करोड ५१ रुपैयाँमा ग्लोबल टेण्डरमार्फत विमानस्थल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।
आयोजना प्रमुख अधिकारीले थपे, ‘केही यस्ता उपकरणहरू हुन्छन्, जुन त्यो क्षेत्रको विज्ञ (इन्जिनियर) ले मात्र गर्न सक्छन् । महत्वपूर्ण केही उपकरण जडानको लागि युरोपबाट नैं इन्जिनियरहरू ल्याएर जडान गर्नुपर्छ ।’ हामी उडान सुचारू भएपछि उनीहरूसँग समन्वय गरेर ल्याउनको लागि पहल थाल्नेछौं ।’
विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । विमानस्थल सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ४, ७, १०, ११ र मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को ८१० विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जसमध्ये ५०० विगाहा जग्गा स्थानीयको अधिग्रहण गरी विमानस्थलका लागि प्रयोग गरेको थियो ।
पछिल्लो दुई वर्षमा विमानस्थलले सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुुशील कोइरालाले २०७१ साल माघ १ गते विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए । पटक–पटकको विवादले दुई वर्ष विमानस्थल निर्माणको काम गिजोलिएको थिए । तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गरी सबै समस्या समाधान गरेपछि विमानस्थलले निर्माणको गति लिएको थियो ।
‘एयर रुट’ टुंगो लाग्न बाँकी
निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एयर रूट’ विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । एयर रूटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडड्यन संगठन (आइकाओ) सँग नेपाल र भारतको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता राजन पौडेलले विमानस्थल सञ्चालनमा लागि आवश्यक एयर रुट परमिट टुंगो लाग्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो विषय छलफलकै क्रममा छ । नेपालले मात्र टुंगाएर हुँदै नेपाल–भारत र आइकाओसँग जोडिएको छ । विमानस्थल निर्माण पूरा भइसक्दा रुट अनुमतिको विषय पनि टुङ्गो लाग्छ ।’
चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसनले सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ मा ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार दुई सय २७ रुपैयाँमा ग्लोबल टेण्डरमार्फत विमानस्थल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ४० दशमलव ५ प्रतिशत ऋण तथा १८ प्रतिशत अनुदान रहेको छ । लुम्बिनीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने सबै जहाज अवतरण गर्न सक्छन् । मुआब्जा वितरणमा २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा १ हजार ७ सय ४० परिवारको घरजग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।
दैनिक १६ हजार यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने
विमानस्थलको दीर्घकालीन लक्ष्य दैनिक १६ हजार यात्रुलाई सेवा दिने रहेको छ । दैनिक १६ हजारका दरले वार्षिक करिब ६० लाख यात्रु विमानस्थल भएर यात्रा गर्ने सरकारी आँकलन छ । विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जामार्फत १० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । एडिबीको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिनेछ । विमानस्थललाई प्रदूषणरहित विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने गरी नेपालमै पहिलो प्रयोगको थालनी गरिएको हो । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीनजिकैको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बिनीमा पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लामा खाद्यान्न संकट
दैलेख । कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्ला बर्सेनि खाद्य संकट हुने गरेको छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा...
विपदमा किन बढ्छ परपीडक प्रवृत्ति ?
Exclusive रासस - March 22, 2020
घटना नं १ : नेपाल प्रहरीले कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा देखिएको भन्दै भ्रामक श्रव्य सामग्री (अडियो) बनाइ सामाजिक सञ्जालमा राख्ने रामेछाप घर...
Breaking News राजधानी संवाददाता - February 5, 2020